--Lọ - Nnọọ Multi Ngosiputa EMD Software (Ihe omimi di omimi)
Easy Multi Ngosiputa EMD Software (Ihe omimi diiri)
Etu ihe ntinye akara dijitalụ kachasị dị n'ahịa.
Roomslọ ebe anyị na-eme ihe ngosi
Ogwe mkpọsa azụmahịa
Dijitalụ Nnabata Dijitalụ
Ejiji & azụmaahịa
Ogwu & Ahụike
Lọ oriri na ọ Cụ &ụ & ụlọ
Schoolslọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ
Lee vidio anyị
AKWOFKWỌ AKW SKWỌ AKW SKWỌ AKIGKỌ
Ndị kachasị akwụ ụgwọ n'ahịa.
KWES ER E KWESULRAS MULTI MARA
Olee otú Easy Ngosipụta Ngosipụta Na-arụ Ọrụ
Ma ị bụ obere azụmahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, Easy Multi Ngosipụta na-eme ka ọ dị mfe igosipụta ọtụtụ mgbasa ozi gị n'ọtụtụ ngosi. Site na iji ikike 1, ị nwere ike igosipụta ụzọ mgbasa ozi 24 dị iche iche n'otu oge, gafee ihe ngosi 6 dị iche iche. Gwa anyị okwu banyere azịza ụlọ ọrụ anyị maka nhọrọ ngosipụta enweghị njedebe.
Mbido kọmputa na ihe ngosi TV.
Wụnye sọftụ Mfe Ngosi Mfe.
Hazie ntọala ngosipụta gị.
OLEE ANA EGO?
Easy Ngosipụta Dị Mfe bụ maka nzukọ ọ bụla chọrọ igosi ndị ahịa na ndị ọbịa ozi ozi dijitalụ.
Pịa n'okpuru ka ịchọta ihe ndị ọzọ.
Cafes & ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ
Stolọ Ahịa Ejiji & Ndị Ahịa
Kedu otu ị ga - esi
Ngosiputa Ntutu Multi?
Kpọtụrụ anyị ka anyị kparịta
Imirikiti ndị asọmpi anyị na-akwụ ụgwọ € 30 kwa enyo, kwa ọnwa. N'ihi ya, ị na-akwụ ihe karịrị € 360 kwa afọ naanị otu ihuenyo! Offọdụ ndị asọmpi anyị na-ajụ gị ka ịzụta sọftụwia ọzọ na ọnụego € 1200 site na akpa. Na Easy Multi Display, ị ga-akwụ naanị otu ugboro.
Dị Mfe Multi ngosi
ANY COM NA-EGO
Jiri ihe ngosi ruru 6 n’enweghi ego ọzọ.
Enweghị ụgwọ na-aga n'ihu ma ọ bụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Jiri kọmputa nke gị iji hazie ngwanrọ ahụ.
Enweghị ịntanetị ịchọrọ.
Ọnụ ahịa na-abawanye na ọnụ ọgụgụ ngosipụta.
Na-akwụ ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa.
Chazụta onye ọkpụkpọ nke atọ iji mee ngwanro ahụ.
Ọrụ igwe ojii nke chọrọ ịntanetị.
Site na ịhọrọ Mfe Ngosipụta Dị Mfe, ị nwere ike ịchekwa ihe ruru € 250 kwa ọnwa, nke ahụ bụ € 3000 kwa afọ na ntinye aka dijitalụ gị.
NWA ANYA M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MAKA PUTE PUTA
Mwepụta weebụsaịtị, kpanye vidiyo, ma gosipụta vidiyo mpaghara, onyonyo na egwu.
Ọ dị mfe iji plọg na ngwanrọ egwuregwu. Onweghi ihe eji eme ihe ndi ozo choro.
Sọftụwia na-arụ n’igwe igwe mpaghara gị. Enweghị internet ma ọ bụ netwọ ojii igwe ojii dị mkpa achọrọ.
Kwụọ ụgwọ otu ugboro maka akwụkwọ ikike igosipụta otu ihe dị mfe ma jiri ya ruo mgbe ebighi ebi.
Anyị na-enye nkwado dị mma. Chọọ nke anyị ihe ọmụma, ma ọ bụ jụọ anyị maka ọzụzụ onwe anyị.
Na ikikere ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike igosipụta ma na-agba mmemme sọfịwia ndị ọzọ!
IHE NDU ANY C NA-EKWU
Tupu anyị ede ederede anyị menus na slates. Ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ, ọ naghị enwecha mmetụta. Na Easy Multi Ngosipụta, anyị na-adọrọ uche ndị ahịa anyị ozugbo.
Onye njikwa ọrụ biya, Brussels
EMD nwere ọnụahịa nke na-emegide asọmpi niile! Ọnụahịa ahụ bara uru nke ukwuu ma enweghị ụgwọ zoro ezo. Ndị otu EMD na-anabata ma na-elebara mkpa m niile anya.
Onye njikwa ala na ụlọ, Louvain-la-Neuve
Dị ka aha ahụ na-egosi, EMD dị mfe iji. Amaghị m ihe ọ bụla gbasara kọmputa. Na EMD anyị nwere usoro edozi edozi nke ọma maka ụlọ ọrụ eze.
OFFỌD OF ND C ANYUR ANY.
Kwa ọnwa, ihe karịrị otu narị na iri ise na-azụ ahịa na-eji ngwanrọ anyị gosipụta vidiyo ha, onyonyo ha, na ọdịnaya Weebụsaịtị iji bulie ma kwalite azụmahịa ha.
Anyị na-akpọ ya mfe otutu ngosi n'ihi ibili ma soro ya jiri a
ngwọta ọnụọgụ dijitalụ na anyị dị mfe.
Ihe niile ị chọrọ ibido…
Kọmputa nke nwere kaadị eserese - nke nwere ike iji ọtụtụ ngosipụta.
Dịka ọtụtụ TV dị ka ịchọrọ maka nhazi ngosi gị chọrọ.
Easy Ngosiputa Ngwa Ntinye.
Enweghị ego zoro ezo.
Enweghị ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Enweghị ngwaike dị mgbagwoju anya.
Otu ikike na-enweghị ihe ọ addụonsụ ma ọ bụ nkwalite.
wepụ. VAT *
1 Ikikere ngwanro
Gosipụta mpaghara 24 dị iche iche mgbasa ozi mgbasa ozi
Mmelite Software ojii maka ọnwa iri na abụọ
Nweta Ntanetị Obodo
Ọzụzụ Ntanetị n'ịntanetị na Nkwado
Mbido Ngwanrọ ahaziri iche
Nhọrọ anyị kachasị ewu ewu.
Mmelite Software ojii
Mmelite na-akwụghị ụgwọ maka ọnwa iri na abụọ
Ọzụzụ Ndị Ọrụ Nkwado 1 awa
Ntinye Onsite & Nkwado
Izu igwe na ọrụ anyị zuru ezu.
Kpọtụrụ anyị maka ịnye ọnụahịa.
Offọdụ ọrụ dịịrị ndị ahịa anyị:
To nweta nkwado teknụzụ dị anya
Kpọtụrụ anyị taa iji kpaa mkpa gị.
* Agbakwunye ego a na-eme kwa afọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ịdebanye aha anyị nhọrọ nkwekọrịta mmezi. pịa ebe a chọpụta ihe.
Mfe iji Interface
Ndị ahịa anyị hụrụ naanị etu o si dị mfe iji gosipụta mgbasa ozi ha na Easy Multi Display. Ihe ngwanrọ nke ngwanrọ na - eduzi gị site na nhazi usoro na usoro nzọụkwụ, na - ajụ gị ajụjụ niile dabara n'ụzọ. Kwesighi ịbụ guru teknụzụ iji bilite ma jiri Easy Multi Ngosipụta na-arụ ọrụ.
Wuru ngosi ngosi
Mfe Ngosipụta Dị Mfe na-eduzi gị na usoro Mbido.
Chekwaa otutu nhazi
Chekwaa nhazi nhazi nke otutu ma were ha nwayọ.
NaNhọrọ nke asụsụ: English, French, Spanish na-aga n’ihu ...
Chọrọ ntakịrị enyemaka? Lelee Atụmatụ ricnye ọnụahịa nke na-abịa na ọzụzụ na nkwado otu awa nke software.
Chọrọ onyinye na mwepu ego pụrụ iche?
Debanye aha akwụkwọ akụkọ anyị ma chekwaa.
Anyị ga-ezitere gị akwụkwọ akụkọ mgbe ụfọdụ na koodu ego. Anyị agaghị enwe spam, ịgbazite ma ọ bụ ree ozi gị.
Dị Mfe Ngosipụta Ngosipụta Dị Mfe
Copyright © 2020 Easy Multi Ngosiputa EMD Software (Ihe omimi diiri)
Ndewo, kedu ka m ga - esi nyere gị aka?
Kpọtụrụ ma rịọ maka nkwupụta ...